Olee otú iji tọghata QuickTime (MOV) na-MP3 na mbụ àgwà
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata a video ị dere ya na gị camcorder na MOV usoro MP3, na-agụ isiokwu a.
Part 1. Olee otú Download QuickTime MP3 Files
Part 2. Olee otú iji tọghata QuickTime (MOV) na-MP3 na mbụ àgwà
Nkebi nke 3: Ndị ọzọ MOV ka MP3 converters
Mgbe ụfọdụ mgbe na-agbalị download MP3 faịlụ site na a website, ndị MP3 faịlụ amalite na-egwuri egwu nchọgharị gị iji QuickTime nkwụnye kama nbudata dị ka ihe MP3 faịlụ. Ka ibudata QuickTime MP3 faịlụ:
Na Firefox nchọgharị
Right pịa na MP3 download njikọ ma họrọ "Save Link dị ka" si nhọrọ. Ịhọrọ ọnọdụ ị chọrọ ịzọpụta MP3 faịlụ. Mgbe download zuru ezu, gaa na faịlụ ị họọrọ na abụọ pịa MP3 faịlụ na-egwu ya.
Na Internet Explorer
Right pịa na MP3 download njikọ ma họrọ "Zọpụta lekwasịrị dị ka" si nhọrọ. Ịhọrọ ọnọdụ ị chọrọ ịzọpụta MP3 faịlụ. Mgbe download zuru ezu, gaa na faịlụ ị họọrọ na abụọ pịa MP3 faịlụ na-egwu ya.
Usoro na Google Chrome bụ otu ihe ahụ dị ka Firefox nchọgharị.
Right pịa na MP3 download njikọ ma họrọ "Save Link dị ka" si nhọrọ. Ịhọrọ ọnọdụ ị chọrọ ịzọpụta MP3 faịlụ. Ọzọ, ozugbo download zuru ezu, gaa na faịlụ ị họọrọ na abụọ pịa MP3 faịlụ-egwu ya dị na mbụ.
E nwere ọtụtụ nke converters dị iji tọghata si MOV ka MP3 ma nanị ole na ole n'ime ha ga na-mbụ àgwà nke faịlụ mgbe akakabarede. Ọtụtụ n'ime ha ga-ebelata àgwà nke MP3 faịlụ ka a ala àgwà kama na-edebe ya emebibeghị.
Iji tọghata MOV faịlụ ka MP3 enweghị adịkwa àgwà nke faịlụ, kasị mma ngwá ọrụ iji bụ Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ bụ ngwa ngwa na a pụrụ ịdabere na ngwa na-adịghị Iwe Iwe Ọkụ na àgwà nke faịlụ converted. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ngwaọrụ nke akakabarede na ọtụtụ atụmatụ.
Complete Video toolbox - Ụka, edit, welie, download, ndekọ, ọkụ, hazie, kpọọ, na-ekiri na n'elu 150 formats.
Nwere ihe ndị magburu onwe collection nke video na ọdịyo mmepụta formats ịhọrọ site na mgbe converting.
Enye gị ohere ịhọrọ a lekwasịrị ngwaọrụ iji na-enweta karịa video àgwà nke ngwaọrụ.
Atọghata videos na a ọsọ karịa ugboro 30 ngwa ngwa karịa nkịtị converters.
Na-enye gị ike idekọ na ibudata videos si internet na naanị a mgbata nke a bọtịnụ.
Gụgharia videos nwere ike converted nakwa ebudatara dị iche iche formats.
Audio nwere ike amịpụtara si DVD na video faịlụ ike MP3 faịlụ.
Olee otú iji Wondershare Video Converter Ultimate iji tọghata MOV ka MP3
Converting MOV ka MP3 na Wondershare Video Converter Ultimate dị mfe ma mfe ime. Akakabarede usoro adịghị agbanwe àgwà nke MP3 faịlụ. The MP3 faịlụ a ga-kpọmkwem otú ọ bụ na-enweghị na-eme ihe ọ bụla mgbanwe na ya.
Mgbe nwụnye zuru ezu, na-agba ọsọ Wondershare ngwa si gị na desktọọpụ.
Mbubata MOV faịlụ na ị chọrọ iji tọghata site ma dọlite ​​faịlụ ka Ntụgharị window ma ọ bụ site na ịpị 'Tinye Files' button.
Ekwe ka ya na faịlụ ibu ke Ntụgharị window. Ọ ga-ewe sekọnd ole na ole iji mara dabere na size nke faịlụ.
Mgbe MOV faịlụ a kwajuru na window, pịa na MP4 taabụ n'okpuru 'mmepụta Format' na họrọ 'MP3' nhọrọ. I nwekwara ike họrọ ọzọ formats ma ọ bụ jiri ndị ọzọ na taabụ e wezụga 'Favorite' taabụ ịhụ ndị ọzọ formats ma ọ bụ ngwaọrụ i nwere ike tọghata.
Mgbe na-ahọpụta ndị MP3 mmepụta format, see 'tọghata' button na-amalite akakabarede usoro.
Mgbe akakabarede usoro zuru ezu, ị ga-ahụ a 'Emechara' ihe ịrịba ama n'akuku video.
Ị ga-ahụkwa a mmapụta elu ngosi na ala n'aka nri nke gị ọrụ mmanya agwa gị na akakabarede usoro bụ ugbu a zuru ezu.
Imeghe mmepụta faịlụ ma ọ bụ converted faịlụ, nnọọ pịa 'Open nchekwa' site mmapụta elu ngosi na ọrụ mmanya.
I nwekwara ike imeghe converted faịlụ site na ịpị 'Open nchekwa' nhọrọ ke Video Ntụgharị window dị ka e gosiri na foto n'okpuru.
Ugbu a, gị video e ọma converted si MOV ka MP3 usoro. Ị nwere ike ịga n'ihu na-egwu video on QuickTime ọkpụkpọ na-enweghị echefu ihe ọ bụla njehie.
Free MOV ka MP3
Free MOV ka MP3 Ntụgharị bụ a Ntụgharị na-anabata faịlụ na-atọghata ha ka ha MP3s. Akakabarede usoro na nke a software na-mere ngwa ngwa. Mgbe akakabarede, na MP3 ejikari na-egosi na gị na desktọọpụ.
Ngwa dị mfe ma dị mfe iji
Ọ nwere ngwa ngwa akakabarede ọsọ ma ọ bụghị dị ka ngwa ngwa ka ụfọdụ ndị ọzọ adịchaghị software
Ọ na-enye a pụtara ezi mmepụta faịlụ ma ọ bụghị dị magburu onwe dị ka ndị ọzọ software
Ọ bụ obere size na ngwa na-adịghị na-eri na ihe ka ukwuu ohere na kọmputa gị
Na-adịghị eri ihe CPU usoro mgbe converting
Converted faịlụ dị njikere iji ozugbo
Ị nwere ike ghara họrọ mmepụta nchekwa
Mmepụta faịlụ bụghị elu àgwà dị ka ihe mbụ faịlụ
MOV MP3 Ntụgharị
MOV MP3 Ntụgharị bụkwa a dị ike music Ntụgharị na extractor. Ọ na-ekwe converting MOV ụda MP3.
Ọ atọghata akparaghị ókè ọtụtụ MOV faịlụ ka MP3 n'otu oge na nnọọ ngwa ngwa ọsọ
Mfe iji ọrụ interface
Ị nwere ike hazie mmepụta faịlụ site na ị na-ahọrọ bitrates
Converted faịlụ na-adịghị nke nnọọ elu mma; faịlụ tụfuru ya àgwà
3 Atụmatụ maka QuickTime ngwa ngwa ngagharị i nwere mara
Akakabarede n'etiti QuickTime na FLV on Mac
Top 6 QuickTime uzo ozo maka Windows na Mac
QuickTime ihuenyo ndekọ na Mac na iPhone / iPad
QuickTime ọkpụkpọ maka Mac, ndabara video ọkpụkpọ maka Mac!
5 Atụmatụ maka QuickTime plugin na-arụ ọrụ nke ọma na Chrome!
3 Atụmatụ nke QuickTime trailers ekiri na nbudata na
> Resource> MOV Ntụgharị> Olee otú iji tọghata QuickTime (MOV) na-MP3 na mbụ àgwà